Abwaanada - Hoygamaansada
Ayan Aden, 20-jir ah, waa Gabyaa ku nool magaalada Birmingham ee Dalka Ingiriiska. Waa Gabar la shaqeysa una ololeysa bulshada rayidka. Ayan waxaa laga casumaa oo ay ka hadashaa munaasabadaha ay bulshada qabsadaan, waxay sidoo kale ka hadashay madasha caanka ah ee TEDx. Waxay hormuud ka tahay barnaamijka Guriyeenta ee “West Midlands Combined Youth Authority”, iyadoo xooga saarta horumarinta iyo hoggaanka loo dhan yahay.
Xawa Jaamac Cabdi waa Abwaanad araga la’ uu Eebe hibo siiyay, waxay ku dhalatay tuulo ku taallo gobolka Mudug oo ay ku noolaayeen waalidkeeda oo reer guuraa ahaa. Sida caruurta baadiya lagu yaqaanno, Xawo iyo walaalkeed waxay raaci jireen ariga reerka.